Nanokatra Ady Hevitra Momba Ny Ady Ara-kolontsaina Ny Fanafihana Tao Amin’ny Trano Fisakafoanana Tsy Mihinan-kena Iray Ao Zeorzia · Global Voices teny Malagasy
Nanokatra Ady Hevitra Momba Ny Ady Ara-kolontsaina Ny Fanafihana Tao Amin'ny Trano Fisakafoanana Tsy Mihinan-kena Iray Ao Zeorzia
Voadika ny 05 Jona 2016 5:38 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Deutsch, Italiano, polski, English
Nokorontanin'ireo mpanafika nitondra saosisy, izay nanipy sombin-kena natono tao anaty vilia misy ny sakafon'ireo mpanjifa ary tonga ry zareo hidaroka ny mpiasan'ny trano fisakafoanana tsy mihinan-kena Kiwi Café, ao Tbilisi nandritra ny fandefasana horonantsarimihetsika tamin'ny alin'ny 4 Jolay 2015. Nilaza ny trano fisotroana kafe fa mpanafika am-polony no namorona ny “hetsika mihantsy ny tsy mpihinan-kena.” (Sary: Kiwi Café)
Ity manaraka ity dia lahatsoratra niaraha-niasa tamin'ny EurasiaNet.org izay nosoratan'i Giorgi Lomsadze. Nahazoan-dalana ny famoahana azy indray.
Ny saosisy no fitaovam-piadiana vaovao nosafidiana ao anatin'ny ady tsy fifankahazoana ara-kolontsaina ao Zeorzia.
Tamin'ny 29 May, niditra an-keriny tao amin'ny trano fisakafoanana kely tsy mihinan-kena “Kiwi Café”, toerana tsy mitàna ny kolontsaina ao amin'ny tanàna fahiny ao Tbilisi ireo mpanafika nitondra saosisy, ary nanipy sombin-kena sy trondro tao anatin'ny vilian'ny mpanjifa, ary niherisetra tamin'ireo mpiasan'ny trano fisakafoanana. Voalaza fa niitatra teny an-dalambe ny fifandonana, nandositra ireo mpanafika talohan'ny nahatongavan'ny polisy.
Tsikaritr'ireo mpiasa ireo mpanafika fa mpikambana ao amin'ny Georgian Power na “Hery sy Fahefana Zeorziana”, vondrona nasionalista tia manao solaloha. Nilaza tamin'ny Haino aman-jerim-panjakana Zeorziana i Giorgi Gegelashvili, mpiasan'ny trano fisotroana kafe fa nanana tantara fifandirana tamin'ny mpiasa sy ny lehiben'ny trano fisakafoanana ireo mpikambana ao amin'ny vondrona mahery fihetsika, angamba noho ny fanoherana mafy ny soatoavina tohanan'ny trano fisakafoanana izay nilaza ny tenany fa tsy mpandala soatoavina fa tia filaminana. “Andro maromaro talohan'izay, efa nanafika ny iray tamin'ireo namana sy mpanjifanay izy ireo, nanompa azy sy nandrora ny tavany ary nandrahona hanatontosa fanafihana ao amin'ny trano fisakafoanana,” hoy i Gegelashvili.
Nilaza ho tsy nandray anjara tamin'ny korontana ny Georgian Power, manizingizina izy fa tsy manana programa miady amin'ny tsy mpihinan-kena. “Tsy laharam-pahamehanay ny fanerena ny tsy mpihinan-kena hihinan-kena,” hoy ny vondrona tamin'ny fanambarana navoaka tao amin'ny pejy Facebook-n'izy ireo tamin'ny 31 May.
Nilaza kosa ny vondrona fa ny manahirana indrindra azy ireo dia ny fibodoan'ny Rosiana hatrany ny faritany mpisintaka Abkhazia sy Ossetia Atsimo ao Zeorzia, ary ny filozofia sy ny liberalisma manjakazaka eo amin'ny governemanta Zeorziana. Nilaza ihany koa ny vondrona fa tsy mihinana afa-tsy voatabia ary “tsy hihinana hena atsy ho atsy” ny sasany amin'ireo mpikambana ao aminy.
Ny zava-nitranga tao Kiwi Café dia mampiseho ny firongatr'i Zeorzia ho firenena lohalaharana ao anatin'ny fifandonana goavana ara-kolontsaim-paritra izay mamely an'i Rosia izay milaza ny tenany fa mpiaro ny soatoavina “nentim-paharazana”, ary manohitra ny Vondrona Eoropeana sy Etazonia izay mpanohana ny soatoavina Tandrefana. Nanasonia fifanekem-piarahamiasa tamin'ny Vondrona Eoropeana tamin'ny taona 2014 ny fitondram-panjakana Zeorziana, ary nikatsaka hatry ny ela hiditra ho mpikambana ao amin'ny OTAN. Saingy misalasala momba ny fampidirana ny soatoavina tandrefana ny ampahan'ny maro amin'ny fiaraha-monina ao Zeorzia, firenena Kristianina Ortodoksa hiringiriny – manahy indrindra fa mety hanohintohina ny fomban-drazana ara-kolontsaina ao an-toerana ny firohotry ny soatoavina tandrefana.
Nanjary niha-niloa-peo ireo mpiaro ny soatoavina “nentin-drazana” ao Zeorzia – anisan'izany ny nasionalista sy ny mpandala ny nentin-drazana ara-tsosialy. Nampiantrano ny fivorian'ireo mpanohana ny soatoavina nentim-paharazana ohatra i Tbilisi, tamin'ny tapaky ny volana May – fivoriana manana anarana amin'ny fomba ofisialy hoe Kongresy Manerantanin'ny Fianakaviana – izay niampangan'ireo mpandahateny tsirairay nandritra izany fotoana izany ny fielezan'ny hevitra mampidi-doza atosaky ny Vondrona Eoropeana sy ny governemanta Amerikana. “Ny Liberalisma no Fahavalo”, hoy i Levan Vasadze, mpikarakara ny kongresy.
Ny adihevitra momba ny soatoavina hatramin'izao dia mifantoka amin'ny lohahevitra mafana nentim-paharazana, anisan'izany ny zon'ny LGBT sy ny fanalan-jaza. Saingy ankehitriny, toa misokatra ny fahadisoam-pijery vaovao momba ny olan'ny safidy ara-tsakafo. Toa heverin'ireo nasionalista hiringiriny fa tsy Zeorziana ireo tsy mpihinan-kena, ka noho izany dia loza mitatao amin'ny fanasoavana ny firenena.
Niteraka fanehoan-kevitra marobe tao amin'ny media sosialy ny zava-nitranga tao amin'ny Kiwi Café – manomboka amin'ny fahatezerana izany ka hatramin'ny vazivazy. Satria anjara asan'ny renibe Zeorziana ny tsy maintsy mamahana ny tsirairay, nananihany tao amin'ny aterineto ny sasany fa fanafihana nataon'ny “bebiebi” teny Zeorziana midika hoe “renibe”, izay leo ny zafikeliny tsy mihinana araka ny tokony ho izy iny. Ny sasany kosa nilaza hoe: lela mihidy mafy ao amin'ny takolaka, fanafihana nokarakarain'ny orinasa mpanao fonon'entana boaty iny.
Saingy ho an'ny maro, tsy zavatra kisendrasendra fotsiny ny ady tao amin'ny Kiwi Café, fa famantarana mampanahy momba ny fifohazan'ny fanindrahindram-pirenena tafahoatra indray izay nisy fiantraikany ratsy tao amin'ny firenena roapolo taona lasa izay.
Nirehetan'ny kabary tsara lahatra sy sarina lehilahy manao saron-tava miaraka amin'ny totohondry ambony ny pejy Facebookn'ny Georgian Power. Nilaza ny vondrona fa “an'ny Zeorziana i Zeorzia,” teny filamatra nalaza nandritra ny fitondran'ny filoha nasionalista voalohany, Zviad Gamsakhurdia (1991-1992), izay nitondra nandritra ny korontana naharitra fotoana ela nahitana ady an-trano sy adim-poko.
Naneho fankahalana vahiny, liberaly sy LGBT ihany koa ny vondrona. Tsy voafetra ao amin'ny aterineto ihany no hetsik'izy ireo. Tamin'ny taona lasa, nizara lahatsary ahitana Afrikana sy Arabo niharan'ny herisetra sy voan'ny totohondry tao afovoan-tanànan'i Tbilisi ny olona iray malaza fa olona ambony ao amin'ny vondrona. Nanatontosa fanadihadiana avy eo ny polisy, saingy tsy nisy valiny nivoaka tamin'izany.
Mitaraina ireo mpikatroka amin'ny fiarahamonina sivily fa kamo mihetsika amin'ny ankapobeny ny polisy Zeorziana tamin'ny fanadihadiana notontosainy momba ny herisetra vao haingana tao amin'ireo mpikambana ao amin'ny mpanohitra ara-politika, vondrona LGBT ary ny vahiny.
Nilaza ireo mpiasan'ny Kiwi Café fa niampanga azy ireo ho nanao fihantsiana tamin'ny zava-nitranga tamin'ny 29 May ny polisy ary tsy nahavita nifehy ireo mpiaramonina maromaro niandany tamin'ny mpanafika. Nanokatra fanadihadiana momba ny zava-nitranga tao amin'ny Kiwi Café ny manampahefana ny ampitson'ny fanafihana. Mihevitra ireo mpitsikera ny polisy fa nanampy nanosika ny polisy mba hihetsika ny fanehoana fahatezeram-bahoaka.
Namoaka fanambaràna ny Kiwi Cafè tamin'ny 31 May fa ny nampiavaka ny zava-nitranga roa andro lasa dia izy toy ny fanafihana fiarahamonina sivily. Lasa nametraka ilay trano fisakafoanana ho toeran'ny fandeferana izany. “Afaka maneho ny fanohananao amin'ny alalan'ny fitsidihana ny trano fisakafoanana ianao amin'izao fotoan-tsarotra izao,” hoy ny fanambarana. “Ho velom-pankasitrahana tanteraka izahay raha tonga hampiseho ianao fa marobe amintsika no miahy, sy mihevitra fa zava-dehibe izao.”
Any Georgia, nandresy tamin'ny fifidianana fihodinana faharoa ny antoko Dream Party
3 herinandro izayArmenia
Mpiara-miasa amin'ny fanavaozana ve ny Vondrona Eoropeana sy i Armenia?